होटलको बिल तिर्न नसक्दा युवतीलाई यसरी बेश्यावृतिमा लगाइयो ? « Today Khabar
होटलको बिल तिर्न नसक्दा युवतीलाई यसरी बेश्यावृतिमा लगाइयो ?
प्रकाशित २८ माघ २०७४, आईतवार ०२:३९
काठमाडौं, २८ माघ । चितवनकी रेश्मा (नाम परिवर्तन) हराएका आफ्ना बुबा खोज्दै २ महिनाअघि काठमाडौं आइन्। उपत्यकामा उनका आफन्त र चिनेजानेका कोही थिएनन्। उनी कलंकीस्थित पशुपति गेष्टहाउसमा बसेर बुबा खोज्न थालिन्।
सोही क्रममा लामो समयदेखि गेष्टहाउसमा बस्दै आएकी युवतीलाई पनि प्रहरीले सोधपुछ गर्यो । सोधपुछको क्रममा वेश्यावृत्तिको धन्दा खुलेको डिएसपी क्षेत्रीले बताए। साभारः नेपाल लाइभ